Zvose pamusoro peProviron
1.Chii Proviron? Chinoshanda sei? 2. Proviron dosage
3.Proviron cycle 4.Proviron mhinduro
5.Proviron hafu yeupenyu 6.Proviron yekucheka
7.Proviron yekubvuta 8.Proviron Benefits
9.Proviron mhinduro 10.Proviron inotengeswa
11.Proviron yekugadzira Muviri -Kumusoro
1. Chii chinonzi Proviron? Chinoshanda sei?
Proviron iri zita rezita re androgen inodanwa Mesterolone. Uyu mishonga yemuromo iyo haifaniri kuonekwa seanabolic steroid nekuda kweiyo yakaderera anabolic mitezo mumuviri. Kutaura zvazviri, zvinoonekwa seine zero uyerogenic madhara. Proviron yakagadzirwa muC1934 nekusvibisa ichikuita pakati pekare zvakakonzerwa uye zvakatengeswa steroid nenzira yekurapa. Chirwere ichi chave chiri pamusika nemazita emhando dzakasiyana, asi Proviron yakaramba yakanyanya kupfuura makore. Kune rumwe rutivi, Proviron achiri chimwe chezvinhu zvisingazwisisiki steroids. Iwe unogona kutenga mishonga kubva kune zvakasiyana-siyana zvekutengesa kana kuronga muIndaneti pane webhusaiti yedu.
Proviron (1424-00-6) steroid yakasiyana-siyana iyo inowirirana zvakasiyana-siyana zvakafanana Masteron (Drostanolone), Winstrol uye Anavar kune imwe nguva. Maererano nekushanda kwayo, Proviron haigoni kushandiswa kukurudzira masimba ekuvaka mashekeri makuru, asi inowedzera kubatsiridzira mukudzidzira muviri. Izvozvo zvakati, Proviron inowanzoshandiswa mukucheka maitiro nemasangano akawanda nevatambi. Munyika yekurapa, Proviron iri pakati pe steroid yakashandiswa zvikuru mune mushonga wemazuva ano. Zvisinei, Mesterolone kubvira pakuberekwa kwayo haina kumbobvumirwa kushandiswa kwevanhu neUnited States of America FDA.
Chekutanga Proviron inoshandiswa munyika yezvechiremba ndeyokurapa androgenic kukanganisika iyo inonyanya kuchinja yekare. Mushonga wacho unoshandiswawo semubatsiro wekubereka uye pre-pubescent yevarume. Izvi chete zvinogadzira Proviron steroid inobatsira zvikuru inopa migumisiro yakanaka mumuviri womunhu. Kunyange zvazvo mishonga iyi inofungidzirwa kuva mishonga yakwegura, yakamira nguva yekuedzwa, uye kupfuura kwemakore yakachengeteka, uye inobvumirwa nevarwere vazhinji. Bodybuilders nevamwe vatambi vashandisewo mano ezvinodhaka kuti avabatsire kuwana mishonga yakaoma nekuvandudza testosterone hormone levels. Testosterone hormone inoita basa rinokosha pakubatsira vatambi uye varimi venyama kuti vawedzere kushanda kwavo.
Proviron dihydrotestosterone yakabva anabolic steroid, uye yakagadziriswa DTH hormone pamwe nekuwedzera kwemethyl boka nekakoni pane imwe nzvimbo. Izvi zvinogonesa hormone kuti ichengetedze kuwedzerwa kwemuromo sezvo ichichengetedzwa kubva pakuparara kwepfungwa. Proviron ndeyemamwe mashomanana emuromo anabolic steroid iyo isiri C17-alpha alkylated, asi panzvimbo yayo, inotakura methyl boka. Oral Primobolan imwe steroid inozivikanwa ine methyl yeboka rimwechete. Proviron ine inonzi androgenic ye 30 kusvika 40 uye nhamba yevanabolic yakabva ku 100-150. Kuongororwa kwakaitwa mukuenzanisa na testosterone. Kunyange zvazvo Proviron ine chikwata chakakwirira chevanabolic kupfuura testosterone, inoratidzira zvishoma zvinyorwa zvinebolic properties.
Iyo yakanyanya kuzivikanwa Proviron rubatsiro isimba rekuita se-anti-estrogen kuburikidza nechiito chayo se aromatase inhibitor. Mushonga weAromatase inhibitor simba unogona kufananidzwa neyeArimidx, asi zvishoma. Proviron inewo ukama hweHormone Binding Globulin (SHBG), iyo ipuroteni inosungirirana zvakanaka kune vanabolic steroid muropa rako uyewo nekuita kuti irege kushanda kana yaisunga. Sustanon 250 Mashandisiro, Nhanho, Nhamba, Zvipo, Mazano
Saka, kutora Proviron nemamwe vanabolic steroid inowedzera mabasa ayo uye inoita kuti unakidzwe nemigumisiro yakawanda. Iyo mishonga inopa nzira uye nzvimbo inogonesa kuburikidza nemichina yakataurwa pamusoro apa kusiya zvimwe zvisingaverengeki uye zvepachena testosterone kuti iite mabasa ayo. Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, zvinokurudzirwa kuti vese vashandisi vaende kuchipatara chekucherechedza uye vanosanganisira chiremba munharaunda yose. Hazvina mhosva kuti mishonga iyi inoshanda sei, dzimwe nguva inogona kushanda zvakanaka nevamwe vanhu nekuda kwehutano hwavo kana kuoma kwemaitiro emitumbi.
2. Proviron dosage
The Proviron dosage zvichienderana nezvido kana zvikonzero nei uchiri kutora. Vamwe vashandisi vanorayirwa kuti vatore madhoji akaderera apo vamwe vanofanira kuenda kumadhora makuru kuti vaone migumisiro. Semuenzaniso, munyika yezvehutano mukurapa kusakwanira uyerogenicity mumuviri, imwe 25mg Proviron tablet iyo inofanira kutorwa zuva rimwe chete zvinoreva kuti zvikamu zve 75 gm zuva nezuva ndiyo inonzi inorayirwa. Nhamba yacho inobva yaderedzwa kusvika 25mg pazuva kuti kuchengetedza Proviron mazinga mumuviri. Mukushaya rubatsiro mune varume, kuenzana kwakafanana kuchave kwakakwana kuunza zviitiko zvinotarisirwa. Zvisinei, iwe unofanirwa kubvumira chiremba wako kuti agadzire dheji yakakodzera yemamiriro ako.
Mukugadzira muviri uye kutamba, Proviron madhesi akakwirira kudarika kana akashandiswa mukurapa zvinangwa. Pano madhawiti anobva ku50-150mgs pazuva nokuda kwekutonga masero eestrogen kana kuti kuderedza huwandu hwekuchengetedza mvura mumuviri. Pakutanga, chiremba wako angakukurudzira kuti uende kunzvimbo dzepasi dzinogona kuwedzerwa sezvaunopfuurira nehupenyu hwako. Kune vashandi vanooma, mapeji makuru ega ndiwo anounza mhinduro dzinotarisirwa. Kushanda kwakanaka uye kudya kunobatsirawo munhu wese anovaka muviri kana mutambi kuti ave nemigumisiro yakawanda.
Vakadzi vechikwata uye vanogadzira muviri vanoshandisawo zvinoshamisa zvinodhaka izvi zvinoshamisa, kunyange zvazvo zvisingabvumirwe kushandiswa kwevakadzi. Kune vashandi vechikadzi, chirwere ichi chinopa migumisiro yakanakisisa, asi inofanira kushandiswa mumadhora mashoma e-25mgs pazuva nokuda kwebhururuka kubva ku4 kusvika kumavhiki e5. Iyo mizinga yakawanda yevakadzi inogona kutungamirira mukukudzikisa kwevanhu vanhu hunhu hwakadai semasumbu, kukura kwebvuri nekudzika kwezwi. Zvechokwadi, hapana mukadzi kunyange vatambi vangada kukudziridza vanhu vakadaro kunyange kana ari kutarisa kuva nebasa rakabudirira. Kana pane chero chakaipa Proviron madhara, chiremba anogona kuderedza doro kana kupedza chirwere chacho uye kuwana mishonga inorambidzwa kune hutano hwako.
Kungofanana nekushandisa dzimwe steroids, kana ukaona chero zviitiko zvausina kunaka, ratidza mutsa wako chidimbu nenguva. Dzimwe nguva kunyange kana iwe uchienda kune madhesi maduku, unogona kuguma wava nemigumisiro yakakomba. Zvakajairika nokuti miviri yevanhu haina kufanana uye dzimwe dzakaoma zvikuru. Kune vamwe vashandisi, chirwere chezuva re25mg chinogona kuva chakakwirira, asi chiremba wako anogona kugara achiwana mukana wakakodzera wezvaunoda. Vashandisi vechikadzi vanofanirawo kushandisa Proviron nekuchengetedza kwakanyanya sezvo mamwe emigumisiro haigone kuchinjwa.
3. Proviron cycle
Proviron haisi iyo inowanzo vanabolic steroid uye ine simba ine vanabolic yakawanda pamuviri womunhu; saka haisashandisi nenzira yezvakatenderera. Pane kudaro, chirwere chacho chinoshandiswa sechimwe chigadzirwa chekuwedzera kana sevabatsiri mune dzimwe vanabolic steroid mitsara kuderedza kuderedza mitero yesrogen mumuviri wako. Proviron inowanzoshandiswa pamigumisiro inofadza iyo inoita kuti kuwedzerwa kutaridzika kana kuti muviri unofanirwa nevemuteereri wese kana vadzidzisi vemuviri. Maitiro acho anobva pane chikonzero chekushandisa Proviron. Varwere vanotora mishonga vane maitiro mashomanana apo vashandi vemuviri vanogadzira mishonga pamwe nevamwe vanabolic steroid vanogona kuva nenguva yakareba.
Semuenzaniso, varwere vanotora mishonga iyo kubata chirwere kana kuti androgen kusakwana vanogona kurairwa kuti vatore dhigirii panguva yakasiyana. Zvisinei, chiremba wenyu anofanirwa kuisa dhiyo yakakodzera uye kuongorora shure mushure mekuongorora mamiriro ako. Kune rumwe rutivi, vadzidzisi vemitambo kana vatambi vanove vashandi veHotcore Proviron, maitiro avo anotarisana pakati pe8 kusvika kumavhiki e12. Izvo itsva Proviron vashandi mukugadzira muviri kunotanga ne-8-vhiki yevhiki musati chiremba achichiendesa ku12 mumagariro anotevera. Kana, iwe uri kutora mishonga pamwe nevamwe vanabolic steroid, taura zvose zvaunofunga nachiremba wako usati watanga maitiro ako. Yeuka, kuti uchengetedze nguva yose yezvibereko zviri nani. Kutora Proviron madheji akasiyana kunogona kukonzera kuipa kwemigumisiro iyo ndiyo chinhu chekupedzisira chero mushandisi wezvinodhaka angafungidzira, mumwe mushumiri anotarisa pamigumisiro yakanaka. Nokudaro, iwe unofanirwa kunamatira kune zvinyorwa zvinoshandiswa zvinoshandiswa izvo zvichakubatsira kuti uwane hukuru hweProviron.
Vashandi veMiddle Proviron vanewo nguva shomanana pamusoro pemadhora mashoma. Kana iwe uri mutambi wechikadzi kana muiti wemiti, usatora zvinopfuura 25mg tablet zuva rega rega, kunze kwokunge wakurudzirwa zvakasiyana nedhigirii wako. Mhemberero dzomukadzi dzakapfupika uye dzinotanga pakati pe4 kusvika kumavhiki e5. Izvi ndechokuti kushandiswa kwakanyanya kweProviron kuvakadzi kunogona kutungamirira ku virilization. Vatambi vechikadzi vanokurudzirwa kuti vaende kuongororwa kwechiremba nguva dzose kuitira nyore kutarisa kweProviron maitiro mumuviri kare, panguva uye shure mushure mekufamba.
4. Zvitsva zveProviron
Proviron chirwere chinoshamisa kunyange vamwe vatsvakurudzi vakadai seA AT Kicman vakazvizivisa steroid isina simba. Zvisinei, kana yakashandiswa zvakanaka, mushonga wacho unonyatsopa migumisiro yakaisvonaka kuvashandisi. Kungofanana nedzimwe mimwe mishonga, Proviron inopa zvose zvakanaka uye zvisina kunaka zvinokonzerwa nekushandisa kwaunoita. Proviron yakaratidza kuva steroid yakanyanya zvikuru saka kana yakashandiswa pakurapa kana kuti kuvaka muviri zvinangwa. Zvisinei, kuti uwedzere migumisiro, iwe unoda kutora dhiji yakakodzera panguva yakakodzera uye uende naProviron nekudya kwakakodzera kana kushanda kwekuvaka muviri. Heano zvimwe zvezviitiko zvakanaka zveProviron.
Kuvandudza maitiro e testosterone mumuviri
Ichi chirwere chakashandiswa kuwedzera testosterone hormone mumuviri. Hemoni inobatsira zvakasiyana-siyana zvakadai sekuvandudza musimba kukura nekuvandudza libido yevarume. Munhu wese anoda kuve nehomoni kuti ibatsire kukura kwevarume maitiro sekudzika izwi, uye kukura ndebvu pakati pevamwe. Proviron, saka, ine zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoita kuti zvive zvakanakisisa uye inoyevedza testosterone enhancer. Mumamiriro ezvinhu akaenzana, testosterone hormone inonyanya kushanda sezvo yakasungwa neAlbumine uye Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). Proviron iyo ine hukama hwakanaka hweSBBG, apo yakatorwa zvakasungwa neSBBG, nokudaro ichipa testosterone rusununguko rwakawanda rwekuita mabasa ayo pachena. Kune vanhu vane urombo hwe testosterone ipapo Proviron ndiyo yakanakisisa mishonga yekushandisa.
Ita kuti hutachiona huwedzere
Kazhinji, Proviron inowedzera mabasa e testosterone pamwe nemamwe steroid mu mumuviri wako. Izvozvo zvinoreva kuti mapuroteni aizogadziriswa uye zvakare, kuvandudza musimba kukura. Estrogen inobudirira uye inoshanda mumuviri wako chete kana yakachengetedzwa kubva kuneestrogen receptors. Proviron imishonga inonyanya kushandiswa kana yakasvika pakuderedza maitiro eestrogen mumasimba ako, naizvozvo, kuderedza kuwanda kweserogen. Kune rumwe rutivi, Proviron ine unhu hwepamusoro hwearomatase enzyme iyo inosunga ne testosterone pamwe nekuigadzirisa kuva estrogen.
Nguva iyo, Proviron inosunga ne enzyme, iyo inogadzirisa testosterone hormone kubva pakisunga, nokudaro kuderedza kushandiswa kweeserogen mazinga. Uyezve, basa iri rinoguma nekuderera mumvura yakagadzirwa mumuviri wako, nokudaro kupa nzvimbo yakakodzera kuti misimba yako ikure zvakasimba uye yakasimudza. Kuwanda kwevashandi vezvemuviri nevatambi vanoshandisa Proviron kuwedzera musimba wavo kukura zvakanyanya kana zvichienderana nekudya kwakakodzera nekushanda. Proviron inoshanda zvakanaka nedzimwe vana vanabolic steroid, uye iwe unogona kuisanganisira mune chero steroid cycle kuti zvive nani. Ratidza chiremba wako kuti akubatsire kuwana ruzivo rwakakodzera uye kushamwaridzana kuchakubatsira kuti uwane zvaunoda.
Kurapa kwekushaya simba
Erectile dysfunction chirwere chinotarisana nevarume vakawanda zvekare vakwegura kubva pamazinga e testosterone vanoenda sezera rimwe chete. Proviron inovandudza mazinga e testosterone hormone mumuviri uyewo nekuipa iyo nzvimbo inoita kuti zviite zvakanaka. Kune varume vane zvinetso zvisina simba, Proviron yaive chikomborero. Mushonga uyu wakanga wakanyatsonaka mukurapa matambudziko erectile kuvanhu.
Kusapindirana mumarume kunokonzerwa nenhamo yehuroyi. Kunyange zvazvo pasina munhu anokwanisa kutsanangura chaiyo nzira yekusava nemurume, vanachiremba vakatsigira kuti michina inomiririra yakanyanya kunyanya kune androgens dzakadai sa testosterone uye gonadotropin iyo inokonzera kukurudzira nhengo dzepabonde. Muzviitiko zvizhinji, androgens dzakashandiswa nemarangiro ekurapa zvinetso zvekushaya vana muvarume, asi dzinowanzochera zvinyorwa zvegonadotropin zvinoita kuti zvive zvisingabatsiri pakukurudzira mbeu yekuita. The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) yeChipupuriro
Proviron inobatsira nekukurudzira uyerogens mumuviri wako asi ane zvishoma zvishoma pane gonadotropins. Pari zvino, mamwe tsvakurudzo inofanira kuitwa kuti aone kana chirwere chacho chinogonawo kukurudzira gonadotropin. Proviron inoenderera mberi ichive chirwere chinonyanya kuzivikanwa mukurapa kwekusagadzikana kwevarume. Kuvandudza testosterone hormone mazinga mumuviri wako kunowedzera kukwanisa kwako zvepabonde uye mazinga ekuberekawo zvakare. Bvunza chiremba wako kuti uwane mamwe mashoko pamusoro peProviron mukurapa kwekushaya vana.
Proviron negative results
Anenge mishonga yose ine migumisiro inogona kunge iri duku kana yakaoma dzimwe nguva kunyanya kana mishonga yakanyanyisa. Proviron zvakare inogona kukutsanangurira pamigumisiro yakawanda, asi iwe unofanira kuzivisa chiremba wako munguva. Mune zvimwe zviitiko, proviron vashandisi vangave vane magetsi anokwanisa kukuvadza zvinetso. Zvisinei, kunamatira kurapwa kwechiremba wako kunogona kuva nzira yakanakisisa yekudzora Proviron yemigumisiro. Mimwe yemigumisiro yakazara inosanganisira;
Kuwedzera kwepabonde kunowedzera zvakanyanya kune varume vasina matambudziko nehupenyu hwavo hwepabonde.
Inogona kutungamirira ku virilization kuvakadzi pavanotorwa muhotera huru.
5. Proviron hafu yeupenyu
Mushonga uyu une hafu yehupenyu hwemaawa e12. Icho chinoreva mushure mokutora mhosho yako yakarurama, Proviron icharamba yakashanda mumuviri wako kwemaawa anopfuura 12. Nokudaro, ndicho chikonzero nei mishonga yemishonga inowanzoparadzana maviri kusvika katatu nguva yekuchengeta maitiro ayo nguva dzose mumuviri wako kuti zvive nani. Hazvina mhosva kuti chii chaunoda kuti uite kuburikidza nokutora Proviron, icho hachichinje Proviron hafu-upenyu. Kune vanotanga, muyero we50mgs inofanira kuparadzana kuva maviri uye kutora mahwendefa maviri e25mg kaviri pazuva. Proviron ine nguva yekuwana yevheti ye 5-6 iyo inoreva kana iwe uchienda kunoongorora chiremba munguva iyo; iyo mishonga icharamba ichiwanikwa mumuviri wako. Kune vatambi vanobatana mumakwikwi asingabvumi kushandiswa kwechirwere ichi kana zvimwe steroid, zvakanaka kuita nguva yakakodzera, kuti usaparadza basa rako. Vanhu vanogadzira muviri havachina dambudziko, uye vanogona kushandisa mushonga zvakanaka nguva ipi neipi uye vanozadzisa zvinangwa zvavo zvinotarisirwa mushure mokupedzisa maitiro avo.
6. Proviron yekucheka
Kwemakore akawanda ikozvino vatambi uye varimi vemuviri vave vachishandisa Proviron kuti vabatsire pakufamba kwavo nekucheka. Mushonga unowedzera huwandu hweanrogen nekuderedza maitiro eestrogen mumuviri wako. Kugadzirwa kweproviron kunowedzera mapuroteni pamwe uye kubvumira kuti testosterone mahomoni aite kusununguka. Iyo yakawanda yemafuta yemafuta inogona kukuramba iwe kuonda kwemisungo uye kuoma iwe unofarira semuiti wekugadzira muviri.
Zvisinei, kusanganisira Proviron mukutengesa kwako, ndiyo pfungwa yakanakisisa yekuzadzisa zvinangwa zvako. Nekushanda kwakakodzera uye kudya, iwe pachakupedzisira, udzikure zvakaoma uye zvakasendama misumbu. Kucheka mafuta akawandisa mumuviri wako kunobatsira pakuziva musimba wakaoma uye wakaonda pamagumo ekufamba kwako. Kuwanda kwevanabolic steroid mumusika kunobatsira mukukubatsira kuwana hutundu kana mapaundi, asi pakucheka maitiro, unofanirwa kuisa Proviron mumutambo wako weizi. Bata chiremba wako kuti akubatsire mukugadzira kuronga kwakakodzera kune zvaunoda.
Pano iwe unofunga kuwedzera mamwe mapaundi mumuviri wako uye kukwanisa kukwikwidza zvakanaka. Proviron bulking iyo inonyanyozivikanwa mishonga inogona kuiswa pamwe neanabolic steroid yakasiyana-siyana kuti ibudise mikana uye zvinoshamisa zvinoguma. Nokudaro, kana yakashandiswa yoga, mushonga wacho unogona kuva usina maturo kumudziri wemuviri anoda kukura mishonga yakaoma uye yakaonda uyewo kuwedzera mamwe mapaundi. Kutora Proviron nedzimwe steroids ndiyo pfungwa yakanakisisa kubvira iyo inoshanda zvakanaka pamwe nezvose vanabolic steroid. Iwe unogona kuisa mumutero wako zvishoma kana 50mgs zuva nezuva mukudhinda kwako.
Kudya kwakakodzera uye kushanda kunozoitawo zvinokosha pano, kuti iwe uwane kuwanda kwaunoda. Kuva muromo wemishonga unozofanira kuishandisa zuva rega rega, asi inoshanda zvakanaka nezvimwe injectable anabolic steroids. Kunyange zvazvo vazhinji vemuviri vomuviri vaisanganisira Proviron mumagariro avo ekucheka, zvinogonawo kupa mhinduro dzakanaka kana dzichibatanidzwa mukufamba kwekudzivirira. Vamwe vevatambi vanorondedzera zvibereko zvepamusoro mushure mekubatanidza Proviron mumagetsi avo, zvichireva kuti inonunura imwechete yakagadzirirwa zvakakodzera. Nguva dzose taura nachiremba wako kuti akugadzirire iwe unhu hwakanaka uye uwandu hwemigumisiro yeProviron bulking iri nani.
Proviron inopa migumisiro yepamhizha kuvashandisi vayo vose uye inopa zvipo zvakasiyana-siyana zvose mukuvaka muviri nekurapa. Maererano neongororo dzakasiyana-siyana dzezesayenzi nekuongororwa kwevatengi, zvakajeka kuti mishonga iyi yakabatsira nenzira dzakawanda. Proviron kukwanisa kuwedzera testosterone nedzimwe vana anabolic steroid potency ndizvo zvinoonekwa kune vashandi vakawanda. Kune vashandi veSteroid vasinganzwisisiki nemajojo, Proviron inopa migumisiro yaunoda kuburikidza nemutero wemuromo. Heano zvimwe zvezvakakosha Proviron zvinobatsira;
Kubvira pakuvapo kwayo kwekutanga mu 1934, Proviron yakange iri mishonga yakanakisisa mukurapwa kwekushaya vana uye erectile dysfunction. Zvinetso zveErectile zvinokonzerwa nehutachiona hwe testosterone hormone mumuviri. Sezvambotaurwa, kupererwa kwe testosterone kwakakwirira muhuchembera sezvo hutachiona hwehutano hwepabonde hunoderera nezera. Nokudaro, Proviron yave iri chikomborero kuvanhu vose vasina simba uye vasina vana. Kune rumwe rutivi, Proviron inogona kushandura zviratidzo zve hypogonadism zvinogona kusanganisira low libido, yakasimwa michina yemuviri, masimba emapfupa, uye kuwanda kwemisimba kuderera. Zvimwe zvirwere zvinogona kubvarura mishonga yako, uye chiremba wako anopa chirongwa chekushandisa Proviron. Mumamiriro ose aya, mushonga uyu unongotakura zvinowanikwa zvakanaka kana uchitungamirirwa zvakanaka. Kana iwe uine imwe chirwere chekurapa, idza chiremba wako kuti arege kuva nemigumisiro yakaipa.
Proviron inowedzera kuzivikanwa mukugadzira muviri sezvo inobatsira vashandi kufadzwa nepamusoro pevanabolic steroids inobatsira. Vakawanda vanogadzira muviri vanobatanidza Proviron mukudhinda kwavo kana kucheka. Ichi chinodhaka chinowedzera puroteni yakawanda mumuviri, nekudaro kukurudzira musimba kukura. Kune vashandi vanoita zvakanyanya basa rakaoma, mishonga inovabatsira kuwana mikukutu yakaoma uye yakaonda pamagumo ekuderedza kana kucheka. Kuvhara muviri kunowanzoitika mukugadzira muviri uye kunobatsira vashandi kuona zvidikanwi zvaidiwa mukati mechinguva chiduku. Dzimwe steroid inowanikwa mumuviri inoshandurwa kuva estrogen, uye Proviron inotora basa rinokosha mukudzivisa izvi. Kune rumwe rutivi, steroid inobvumira testosterone mahomoni kuti ashande zvakasununguka mumuviri, nokudaro achivimbisa zvibereko zvakanaka zvakadai sekuvandudzwa kwemisungo yakaneta kune vose vanovaka muviri.
Proviron inofanana neDHT, uye inowedzera kuva nemigumisiro yakadai seyokusimudzira kusuruvara kwemisimba nekuvandudza simba rose remuviri iro rinoita kuti vatambi vadzikwire zvakanaka. Kazhinji, chirwere ichi chinowedzera mutambi wacho wose mukushanda pamwe chete mumakwikwi chaiwo-nguva. Mune dzimwe mimwe mitambo umo simba uye muviri simba, Proviron anoita zvakanaka. Mashoko akanaka ndeokuti Proviron inongowanikwa kwemavhiki mashoma e6 mushure mekuzadzisa purogiramu yako. Nokudaro, iwe unongoda kuwana nguva yako yakarurama, uye iwe unoita zvakanaka kunyange mumitambo isingakurudziri kushandisa steroids.
Zvirwere zvakachengeteka zvechiropa chako
Kunyange zvazvo Proviron iri mishonga yemuromo, haisi chepfu kune chiropa chako, uye izvi zvinoita kuti zvive pakati pefiestered steroids mumusika. Vakawanda steroid vashandisi havanzwisisi nejairo yejojo. Nokudaro, iwe unogona kushandisa mapiritsi ePiron uye uchiri kufara nezvibereko. Nokuda kwekushaya simba kwe testosterone, Proviron inopa mhinduro yakanakisisa kune vose vaduku nevakwegura. Iwe unogona kushandisa zvakare mushonga pamwe nevamwe vanabolic steroids, uye hauzovi nemigumisiro yakaipa zvikuru zvakadaro muropa rako.
9. Zvinyorwa zveProviron
Kungofanana nedzimwewo steroid mumusika Proviron yakagamuchira kugadziriswa kwevatengi zvakasiyana-siyana uye mumwe nomumwe anopa maonero akasiyana nezvehupenyu hwavo nemishonga. Vamwe vanhu vanorondedzera migumisiro yakaisvonaka zvikuru kuitira kuti varwere vanotambura vasina simba uye vasina vana. Munyika yezvokurapa, Proviron yave iri mushonga wepamusoro uye yakapa zvigumisiro zvakanaka. Kune rumwe rutivi, vatambi uye vatambi vemuviri vanopawo mishonga yakanakisisa kuongororwa. Kuwanda kwevashandi veProviron vanogutsikana nekukwanisa kwayo kuvabatsira kuwana zvinangwa zvakasiyana. Vatambi vemakwikwi akasiyana vanogonawo kushandisa Proviron kusimbisa simba rose remuviri uye pakupedzisira nekuvandudza kushanda kwavo.
Kutarisa pane zvakasiyana-siyana Proviron Wongororo, iwe unogona kutaurira kuti vazhinji vevatambi vanofara nemishonga. Kunyanya, kukwanisa kwechirwere ichi kuparara mumutumbi wemuviri munguva inopfupika inogona kuve yakarumbidzwawo nevashandi vakawanda. Proviron inonyangarika mumuviri mushure memasvondo e6 anoita kuti ive yakakosha yekuwedzera kune vatambi vanobatsirana mumakwikwi avarambidza kushandisa steroid. Nenguva yakakodzera, iwe unogona kushandisa Proviron uye unobatanidzwa mumutambo wako unotevera zvakanaka.
Zvisinei, vamwe vashandisi vanonyunyuta nezvekuva nemigumisiro yakasiyana-siyana mushure mekushandisa mishonga yakadai semusoro, maitiro ezvishoma uye kukura kwakanyanya kwevaduku vashandisi. Mitumbi yevanhu yakaoma, uye ndicho chikonzero vanhu vanoona zvinetso zvakasiyana zvose zvakaipa uye zvakanaka. Zvirongwa zveProviron zvinogona kudzorwa nekutora dhiyo yakakodzera. Unogonawo kutaura nachiremba wako paunotanga kuona migumisiro yekubatsira kuti uwane mhinduro. Munyika ye steroid, havasi vose vanowana mhinduro dzakanaka, asi zvizhinji zvemigumisiro inokonzerwa nekudarika kweproviron.
10. Proviron kutengeswa
Pari zvino, kune vakawanda Proviron vatengesi pamusika, saka iwe unofanirwa kunyatsongwarira paunotenga mishonga. Iwe unofanirwa kuyeuka nguva dzose kuti Proviron yemhando chete inogona kukuvimbisa iwe zvibereko zvakanaka. Zvose zviriko nhasi, uye iwe unogona nyore tenga Proviron powder pane webhusaiti yedu. Munharaunda yacho, isu tiri rakanakisisa Proviron muchina uye mutengesi. Izvo zvinoshandiswa pasi rose masangano zvakagamuchira zvigadzirwa zvedu zvose, uye iwe hauna chinhu chaunoshungurudza pamusoro paunenge uchiita urongwa hwako. Isu tinosunungura panguva yakakodzera kuti tive nechokwadi chekuti iwe unotanga mizinga yako munguva yakanaka. Iwe unogonawo kutenga Proviron powder kubva pawebsite yedu.
Nguva dzose inokurudzirwa kuita tsvakurudzo yako pane yePivon vatengesi vanowanikwa. Haisi mutengesi wose waunowana pamusika unogona kuvimbwa. Vamwe varipo kuti vawane mari, uye havana hanya nehupenyu hwako. Tarisa kuongororwa kwakasiyana-siyana kwevatengi, kuongororisa usati waita chisarudzo chako chokupedzisira pane Proviron supplier kuvimba. Tine webhusaiti yakashandisa-evhangeri inokubvumira kuti uite nyore nyore kubva pane chimwe chigadzirwa kuenda kune imwe uyewo ita urongwa wako mukati memasekondi. Iwe unogona kutenga Proviron yakawanda kana kuti yakakwana kuti uwedzere kuwedzerwa.
Uyezve, chengetedza mitemo yenyu yenyika kuti uone kana vakatsigira vane, kutumira kana kushandisa Proviron. Nyika dzinoshanda pasi pemitemo yakasiyana, uye hatidi kuisa vatengi vedu mumatambudziko kutenga zvigadzirwa zvemhando dzedu. Somuenzaniso, muU.SA, kushandiswa kweProviron kana kuti zvigaro kunogona kutaridzirwa senhengo. Izvozvo zvinoreva kutengesa, kutengeserana kana kutenga anabolic steroid uye Proviron chiito chemhosva. MuUnited States, Proviron inobvumirwa nehutano hwega kana kuti inhaka uye kuisawo chirwere ichi zvakare zvakare pamutemo. Mutemo iwoyo unoshanda muKanada asi kutengesa mishonga iyi mhosva inogona kutora chikwereti chikuru, nguva yejeri kana maviri. Usanonoka kutitumidza chero nguva iwe unoda rubatsiro, kana une mibvunzo pamusoro pezvigadzirwa zvedu.
11. Proviron yeMuvhuro -Summary
Proviron yakashandiswa nevakawanda vomuviri wehutachiona hwekucheka uye kubhururuka pamwe chete nevamwe vanabolic steroid. Mishonga iyi inobatsira mukugadzirwa kwemasumbu akaoma uye akaonda zvikuru kunyanya kana ichienderana nekushanda zvakanaka nekudya. Proviron pakati pekuita kuwedzera steroid potency mumuviri wako, uye ndicho chikonzero vazhinji vanobudirira vemuviri vemuviri vanosanganisira iyo mumitambo yavo yese. Chirwere ichi chinopawo testosterone hormones rusununguko rwekushanda mumuviri wako, nokudaro kuwedzera chero vanabolic steroid zvibereko. Proviron ine ukama hwepamusoro hwekuzvisunga ne-aromatase enzyme, uye vana anabolic steroid vanogona kuishandisa zvakare sechinhu chinoshandiswa ne aromatase.
Kune rumwe rutivi, Proviron chirwere chinonyatsozivikanwa chinosunga zvakanaka neHomen Hormone Binding Globulin, iyo inoderedza kusununguka kwe testosterone mumuviri wako. Ndicho chikonzero vamwe vashandi vemuviri vanosarudza kushandisa mushonga panguva yePCT. Zvisinei, mukugadzira muviri Proviron oga haakwanisi kutakura mhando dzemitambo kunze kwekuti yakaiswa pamwe nezvimwe zviratidzo anabolic steroids. Chirwere ichi chinozivikanwa nokuda kwemasumbu ayo akaoma dzimba uye inowedzera muviri simba iro rakakosha pakuita basa uye munguva yemakwikwi. Funga kuyero yakataurwa nachiremba wako kuti urege kunetseka. Kuderedza kuwedzerwa kwemajeri kunogona kuita kuti zvive nemigumisiro kana kukudzivisa kubva pakuwana zvinangwa zvako.